China custom tri-blend 50% polyester 25% landihazo 25% rayon racerback malalaka tanky tampon'ny tank miaraka amin'ny logo amin'ny orinasa maro sy mpanamboatra | Fahitana
fomban-drazana vehivavy tri-blend 50% polyester 25% landihazo 25% rayon racerback malalaka tanky tampon'ny tank miaraka amina logo be
Ireo vehivavy Tri ‑ Blend Racerback Tank vehivavy dia mahatratra ny fironana mety rehetra: mifangaro tri ‑, racerback, ary fantsom-pandehandehanana mandrobo. Maivana maivana indrindra, ity tanky mandroso amin'ny lamaody ity no safidy mety indrindra amin'ny hetsika manaraka ataon'ny vondrona misy anao.
1.Ireto vehivavy Tri ‑ Blend Racerback Tank dia mamely ny fironana mety rehetra: mifangaro, mpihazakazaka, ary fantsom-pifamoivoizana feno fandokafana. Maivana maivana indrindra, ity tanky mandroso amin'ny lamaody ity no safidy mety indrindra amin'ny hetsika manaraka ataon'ny vondrona misy anao.
2. Ireo tanky racerback mahazatra dia tandindon'ny fampiononana tsy misy ezaka. Ny akanjony manify dia somary matevina fotsiny ka tsy mila manao cami miaraka amin'izy ireo ianao, saingy azo apetraka izy ireo raha manome aina anao kokoa. Satria ity lobaka ity dia milaza fa mahazo aina ianao.
Teo aloha: bra fanaovana spaoro fampisehoana
Manaraka: Oem pirinty tsotra nosasana malefaka boribory somary malefaka mahia tshirt fototra an'ny vehivavy
tshirt vita amin'ny landihazo
landihazo t shirt
tsotra fanao logo volon'ondry mavokely milatsaka soroka cro ...
ambongadiny breathable polyester marathon fanao ...